पाेखरा १८ कात्तिक- हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं ? टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ?
यस्ता छन् केही केटीका बारे रोचक तथ्यहरु- जब घरका सदस्यहरु बाहिर जान्छन् या एक्लै हुन्छन् उनीहरु आफूलाई मिनी फेशनका रुपमा लिन्छन् । आफूले पछिल्लो समय किनेका नयाँ–नयाँ कपडाहरु लगाउँछन् । त्यो उनीहरुको परीक्षण हो । एक्लै भएको मौकामा उनीहरु परिवारका सामु हेर्न असहज हुने टिभी शोहरु हेर्ने गर्छन् ।
बहाना बनाएर नखाने गरेका खानेकुराहरु फ्रिजबाट निकालेर खान्छन् र यस्तो मै उनीहरु मजा मान्छन् । अरुबेला केटीहरु आफ्नो भूपू ब्याइफ्रेण्डको कुरा सुन्न पनि मन पराउँदैनन् तर एक्लो भएको बेला भूपू ब्याइफ्रेण्डको प्रोफाइल नियाल्छन् र सम्झन्छन् ऊ अहिले कोसँग डेट गरिरहेको होला ?
एक्लो अवस्थामा केटीहरु ऐनाको अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहारलाई विभिन्न रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । कहिले मुख बिगार्छन् त कहिले हाँस्छन् । यस्तो गर्दा उनीहरु आनन्द महशुस गर्छन् । एक्लै भएको बेला केटीहरु प्रायस् कल्पनामै रमाउँछन् । यस्तो सोच्छन् कि आफूलाई केही ठूला पुरस्कार अर्थात महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हासिल होस् । यस्तो अवस्थामा उनीहरु आफूलाई मनपर्ने गीत ठूलो आवाजमा सुन्छन् र गाउने पनि गर्छन् ।